छानबिन गर्ने एन्फाले कारवाही पनि गर्छ ? | Hamro Khelkud
छानबिन गर्ने एन्फाले कारवाही पनि गर्छ ?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– राष्ट्रिय फुटबल टोलीको पहिलो रोजाइका गोलकिपर किरण चेम्जोङ र टोलीका एथ्लेटिक ट्रेनर विवेक विक्रान्त अधिकारीबीचको झगडाको विषयमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बुधबार छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
एन्फाका केन्द्रिय सदस्य मधुसुदन उपाध्यायको संयोकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिलाई कारवाहीको सिफारिससहित असार २९ गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । यहाँ सम्मको प्रक्रियालाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । घटनापछि छानबिन त्यसपछि दोषीमाथिको कारवाही हुनु जरुरी पनि छ । भविष्यमा त्यस्तै घटना नदोहोरिउन, खेलसँग सम्बन्धित सबैले अनुशासनलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने जायज विषय हो ।
तर, खेलाडी वा खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दोषी देखिएमा कारवाही हुन्छ, हुँदैन ? मुख्य प्रश्न यो हो । विवादलाई मथ्थर पार्ने एउटा बहाना मात्र हुन्छ भने त्यो छानबिनको कुनै अर्थ हुँदैन ।
एक वर्षअघिको एउटा घटनालाई हेर्ने हो भने एन्फा छानबिन गरेरपनि कारवाहीको तहमा आइपुग्दा चुकेको छ । गत वर्ष साउनमा ५ खेलाडीले मादक पदार्थ सेवन गरि हो हल्ला गरेको विषयमा एन्फाले छानबिन गरेपनि कारवाही गरेन । त्यसबेला राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा रहेका केहि खेलाडीलाई मौखिक र लिखित स्पष्टिकरण पनि लिइएको थियो । छानबिन गरेर अनुशासन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएर कारवाही गरिन्छ भनिएपनि त्यो घटना त्यसै सेलाएको थियो ।
त्यो घटनामा कसैलाई कारवाही भएन । यसपटक पनि त्यहि नियती दोहोरिदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । गत वर्ष घटनाको केहि पछि नेपालले एसियाली खेलकुद र साफ च्याम्पियनसिप खेल्नु पर्ने भएकोले पनि एन्फाले कुनै कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय टोलीको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने निर्णय लिँदा किरण माल्दिभ्सको क्लबसँग सम्झौता गर्नबाट बन्चित भएका थिए
यसपटकको घटना खेलाडीमा मात्र सिमित छैन । असार ९ गते गोलकिपर किरण र ट्रेनर विवेक बीच प्रशिक्षणकै विषयमा खटपट भएपछि अन्त्यमा विवेकले किरणको अनुहारमा तातो चिया छ्यापेको बताइएको छ । त्यसअघि किरणले विवेकको घाँटी न्याकेको भन्ने चर्चा चलेको छ । यद्दपी त्यसको पुष्टि भने भएको छैन । एन्फा होस्टेलमा भएको उक्त घटना सिसिटिभीमा कैद भएका कारण छानविन सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले घटनाको वास्तविकता र त्यसपछि दोषीमाथि कारवाहीका बारेमा अघि बढाइने बताएका छन् । ‘घटनापछि छानविन गर्ने हो । त्यो प्रतिवेदन आएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अघि बढ्नेछौं । दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न पनि भनिएको छ,’ तुलाधरले भने,‘सुरेश बस्नेत संयोजक रहेको अनुशासन समितिले पनि यो विषयमा छुट्टै छानविन गरिरहेको छ । सबै प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक कदम लिइनेछ । ’